Sanatar Ilyaas oo qaba in ay shacabku u dooraan Aqalka Sare Ajendaha Kulankiisa Koowaad – Kalfadhi
March 31, 2019 Kalfadhi
Sanatar Ilyaas Cali Xasan ayaa, isaga oo xusaya in berri lagu wado inuu furmo Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Aqalka Sare, waxa uu dadka la wadaagay waxa ay jeclaan lahaayeen in looga doodo kulanka ugu horeeya ee Golaha Aqalka Sare. Waxa uu u soo bandhigay ilaa 5 iqtiyaar, oo ah mawduucyo uu u soo jeediyey in ay dadku kala doortaan.
Sanatar Ilyaas waxa uu yiri “maadama berito, oo ah 1-da April, uu Aqalka Sare si rasmi kalfadhigiisa 5-aad u furmaayo, maxay Shacabka Soomaaliyeed jeclaan lahaayeen in uu Ajendaha 1-aad noqdo”? Mawduucyada uu Sanatarku ku soo qoray Feysbuuggiisa, si ay dadku u kala doortaan, ayaa kala ahaa:-
Arrimaha Amniga Xamar
2. Wax-ka-bedelka Dastuurka
3. Nooca Doorashada 2021
4. Arrimaha Badda & Kalunka
5. Sharciyadee Kale?
Qodobada uu Sanatarku soo bandhigay laba ka mid ah waxa ay dhex yaalaan Golaha Shacabka, oo arrinta la xiriirta dastuurka waa tan shalay haddii uu furmi lahaa Kulanka 1-aad ee Golaha Shacabka ay xildhibaannadu warbixin kaga dhageysan lahaayeen Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka, tan amnigana waxaa in Kulanka 1-aad ee Golaha Shacabka looga doodo soojeedinayey xildhibaanno 20 ku dhawaad gaaraya.
Bilaabashada Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Aqalka Sare ee berri ayaa imaaneysa iyada oo uu Golaha Shacabka 27-kii bishaan furay Kalfadhiisa 5-aad, laakiin uu ku guul-dareystay inuu furo Kulankiisa 1-aad shalay, taas oo ahayd qorshihii golahaas uu horay u sameystay. Waxay noqoneysaa markii labaad, intii uu jiray Aqalka Sare ee Soomaaliya, in Labada Gole (Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka) ay Kalfadhiyadooda laba waqti ka kala dhigaan, taas oo muujineysa heerka qilaafka ka dhaxeeya.